Buugga qolka nadiifinta MgO oo laba-dhinac leh
Gudiga qolka nadiifta ah ee MgO wuxuu leeyahay iska caabin dab oo wanaagsan waana guddi aan guban karin. Waqtiga gubashada joogtada ah waa eber, 800 ° C ma gubto, 1200 ° C bilaa olol, oo wuxuu gaaraa heerka ugu sarreeya ee aan dabka karin ee A1.
Gudiga qolka nadiifinta ee MgO waxay leeyihiin iska caabin dab oo wanaagsan waana mid aan guban karin guddi. Waqtiga gubashada joogtada ah waa eber, 800 ° C ma gubto, 1200 ° C bilaa olol, oo wuxuu gaaraa heerka ugu sarreeya ee aan dabka karin ee A1. Nidaamka qaybsiga ee ka samaysan keel tayo sare leh wuxuu leeyahay xadka iska caabinta dabka oo ah 3 saacadood. Xagga sare, tamar aad u badan oo kuleyl ah ayaa lagu nuugi karaa habka gubashada dabka, taasoo dib u dhigeysa kororka heerkulka deegaanka. Xilliga qalalan, qabow iyo qoyan, waxqabadka magnesium galaaskaguddi had iyo jeer waa mid deggan oo aan saamayn kulaylka iyo hawo qoyan. Xataa haddii biyo lagu qooyay dhawr maalmood oo dibadda loo soo saaro, dabcan waxay ahaan doontaa mid hawada qalalaysa. Ma doodi doono ama ma jilci doono Waxaa loo isticmaali karaa si caadi ah. Nuugista qoyaanka iyo soo noqoshada halogen ayaa dhici doona. Baaritaanka ka dib, theguddi ma laha marin biyood.
Biyo-la'aan iyo qoyaan-caddayn
Xilliga qalalan, qabow iyo qoyan, waxqabadka muraayadda magnesium ee dabka ka caaggan guddi had iyo jeer waa mid deggan mana saameyso dhibcaha biyaha isku ururay iyo hawo qoyan. Xitaa haddii biyo lagu qooyay dhowr maalmood oo dibadda loo soo saaro, dabcan waxay ahaan doontaa mid hawada qalalaysa. Ma doodi doono ama ma jilci doono Waxaa loo isticmaali karaa si caadi ah gabi ahaanba. Ifafaalaha nuugista qoyaanka iyo soo noqoshada halogen ma dhici doonto. Baaritaanka ka dib, theguddi ma laha marin biyood.
Miisaanka fudud iyo lidka-seismic
Cufnaanta muuqata ee magnesium galaaska dabka guddi waa 0.8-1.2g/cm3, taas oo yaraynaysa culayska dhismaha, waxay hoos u dhigaysaa miisaanka derbiga gudaha ee dhismaha in ka badan 60%, waxayna kordhisaa aagga la adeegsan karo 5-8%. Miisaanka fudud wuxuu ku habboon yahay iska -caabbinta seismic ee qaab -dhismeedka wuxuuna si wax -ku -ool ah u yareynayaa qiimaha aasaaska iyo dhismaha ugu weyn.
Maro khaas ah oo ah 5.1.8 cufan oo cufan oo ah dhalada magnesium iyo fiber -ka dhirta oo leh adayg wanaagsan ayaa ka dhigaya muraayadda magnesium dabka guddi miisaankiisu yar yahay, laakiin qaab-dhismeedku waa mid is haysta, xasilloon, aan dhalan-rogin, oo leh adayg u eg alwaax. Waxay si fiican u qabataa cadaadiska cadaadiska, gilgilka iyo jabka, oo leh isku -dheelitirnaan iyo adkaysi siman. Awoodda foorarsigu waxay gaadhaa 322kgf/cm2 (toosan) iyo 216kgf/cm2 (jiif), oo awoodda saamaynta waxay gaari kartaa 25MPa.
Galaas magnesium oo aan dabka lahayn guddi kuma jirto asbestos, formaldehyde, benzene iyo walxo shucaac leh oo waxyeello leh, waana qiiq la'aan, aan dhib lahayn oo ur lahayn marka dabku soo gaadho. Maaddooyinka la soo saaray waa budada macdanta dabiiciga ah iyo fiber dhirta. Habka wax -soo -saarka si dabiici ah ayaa loo ilaaliyaa, iyadoo la isticmaalayo tamar yar, bullaacad la'aan, keydinta tamarta iyo ilaalinta deegaanka. Kuguddi dushiisa kuma jirto budo marka la isticmaalo. Qaab dhismeedka daloolka dabiiciga ah ee gaarka ah wuxuu hagaajin karaa heerkulka gudaha. Ka dhig qolka iyo xafiiska mid raaxo leh.
Dahaarka kaamerada iyo keydinta tamarta
Muraayadda galaaska-dab-damiska guddi wuxuu leeyahay astaamaha daloolada labiska, isku -duubnaanta iyo walxaha aan nooleyn. Awoodda kuleylku waa 0.216w/cm · k, taas oo ka kululaynta ka badan 1.1w/cm · k goynta dhagaxa nuuradda-nuuradda, taas oo badbaadisa isticmaalka tamarta waxayna qolka ku haysaa jawi raaxo leh iyo hawo nadiif ah.
Tayo sare oo heer sare ah oo galaas-magnesium dabka u adkaysanaysa guddi, deggan oo lagu kalsoonaan karo tayada. Marka la barbardhigo galaas-magnesium dab-celiyaha dabkaguddis, waxay leedahay waxqabad kharash wanaagsan, culeys khafiif ah, tamar sare, qiimo dhexdhexaad ah, wax -qabad ka sarreeya iyo waxqabadka rakibidda, waana la dhejin karaa, la jari karaa, lagu qodnaan karaa, la qodi karaa, la rinjiyeyn karaa, la qorsheyn karaa, lana qaadi karaa. Ku habboonaanta, adkaanta sare, ma fududa in la jebiyo, ciddiyaha is-garaacaya, ciddiyaha qoriga iyo ciddiyaha toosan ayaa loo isticmaali karaa si aan loo meel-dayin rakibidda iftiinka, iyo hawlgallo sudhan qoyan iyo qallalan ayaa la isticmaali karaa.
Rinjiyeynta codka iyo xasilloonida
Waxqabadka dahaarka dhawaaqa ee ka sarreeya dab-galaaska-dab-damiska guddi wuxuu xaqiijiyaa jawi qolka fadhiga oo xasilloon oo xarrago leh. Caatada iftiinkaguddi ma saameyneyso waxqabadka dahaarka dhawaaqa ee magnesium galaaska dabka guddi. Dahaarka codka ee dhumucda 6mmguddi waa 29dB, iyo nidaamka kala-qaybinta ee lakabka laba-dhinac leh ee 9mm galaaska magnesium ah ee aan dabka lahayn guddi 75 keel 50 nidaamka qaybinta dhogorta dhagaxa ah ee daboolidda dhawaaqa hawada ayaa ka weyn 42dB, kaas oo ah mid gaar ah oo lebis ah guddis.
Dusha gaarka ah ee siman oo qallafsan ee dabka magnesium galaaska ah guddi waxay siisaa macaamiisha kala duwanaansho shaqaynaya. Dusha siman ayaa lagu dhejin karaa gidaarka gidaarka, alwaaxyada aluminium-caag ah, dabka aan la qurxin karinguddis, dahaarka, PVC, rinjiga buufinta ama rinjiga cinjirka, iwm; dusha sare waxaa lagu dhejin karaa foorno, marmar, granite, boodh iyo rinjiga cinjirka. Muraayadda galaaska-dab-damiskaguddi waxay leedahay xiriir aad u wanaagsan oo ku saabsan agabka kor ku xusan. Waxaa laba jeer laga baaraandegi karaa goobta ama la isticmaali karaa laba jeer. Waxay noqon kartaa mid qaloocan oo qaabeysan leh dhexroor 30cm ah iyada oo aan luminin astaamaha jirka.
Qaaciddada sayniska ayaa si buuxda u xallisa dhibaatada nuugista qoyaanka iyo soo celinta halogen ee galaaska magnesium. Xooggeedu wuxuu kordhaa waqtiga, wuxuu iska caabin karaa daxalka, aashitada iyo alkali, ballaarinta kuleylka iyo is -beddelka wax yar, heerka yaraanshaha qallalan ≤ 0.3 %, heerka bararka ≤ 0.6 %, oo leh -40 resistance iska caabin dhaxan. Ka dib toban sano oo tijaabo ah, muraayadda-magnesium dabka ma lehguddi waa mid waarta, adkaysi u leh gabowga, oo leh cimri dheer.
Cayayaanka iyo caaryada caaryada
Maaddada budada ah ee macdanta ka samaysan waxay ka dhigan tahay hawsha ka-hortagga caaryada, bakteeriyada, ka-hortagga cayayaanka iyo ka-hor-tagga galaaska magnesium galaaska guddi, kaas oo buuxiya heerarka ka-hortagga caariyaynta ee qalabka dhismaha ee Yurub iyo Ameerika.
Hore: Laambadda Induction -ka Aluminiumka ee Xirfadlaha ah ee Shiinaha - Nalalka saafiga saqafka - TekMax
Xiga: Gacan -gacmeed dhogor dhagaxa ka samaysan guddi qolka nadiif ah
Guddi Tusaha Dabka
Gudiga Nidaamka Dabka
Handmade Hollow Mgo Nadiifi Qolka Nadiifinta
Buugga Qolka Nadiifinta Mgo ee Labada Dhinac leh
Qolka Nadiifinta Guddiga
Mashiinka lagu sameeyay MOS guddi qolka nadiif ah
Mashiinka ayaa sameeyay silicate
Gypsum dhagaxa dhogorta dhagaxa nadiif ah
Gacan -ku -samaynta MOS guddi qolka nadiif ah
Gacan -gacmeed godan MgO guddi qolka nadiifta ah
Gacan -gacmeed dhogor dhagaxa ka samaysan guddi qolka nadiif ah
Daaqadda Qolka Nadiifinta Qolka, Qaboojiyaha Hawada Qolka nadiifka ah, Nidaamka Biyaha Qaboojiyay, Sifaynta Unugga Hawada Cusub, Daaqadda Qolka nadiifka ah, Qolka Nadiifka ah,